Iindaba - Intshayelelo esisiseko kwiiTower Cooling
Inqaba yokupholisa yindawo yokufudumeza ubushushu, ngaphakathi kwayo ubushushu buyekwe emanzini ngokudibana phakathi kwamanzi nomoya. Iinqaba zokupholisa zisebenzisa umphunga wamanzi ukwala ubushushu kwiinkqubo ezinje njengokupholisa amanzi ajikelezayo asetyenziswa kwiindawo zokucoca ioyile, izityalo zamachiza, izityalo zamandla, izixhobo zokugaya zentsimbi kunye nezityalo zokulungisa ukutya.
Inqaba yokupholisa amanzi kwimizi-mveliso ikhupha ubushushu benkunkuma kwiatmosfera nangona ukupholisa komsinga wamanzi kubushushu obusezantsi. Iitowers ezisebenzisa le nkqubo zibizwa ngokuba ziinqaba zokupholisa ngumphunga. Ukutshabalalisa ubushushu kunokwenziwa kusetyenziswa umoya okanye ngumphunga wamanzi. Ukujikeleza komoya kwendalo okanye ukujikeleza komoya okunyanzelekileyo kusetyenziswa ukugcina ukusebenza okufunekayo kokusebenza kwenqaba kunye nezixhobo ezisetyenziswa kwinkqubo.
Inkqubo ibizwa ngokuba “ngumphunga” kuba ivumela intwana yamanzi ukuba apholiswe ukuba abe ngumphunga ohambayo, ibonelela ukupholisa okubonakalayo kuwo wonke loo mlambo wamanzi. Ubushushu obuvela kumjelo wamanzi obudluliselwe kumjelo womoya buphakamisa ubushushu bomoya kunye nokufuma okulinganayo ukuya kwi-100%, kwaye lo moya ukhutshelwa emoyeni.
Izixhobo zokulahla ubushushu ngomphunga - ezinje ngeenkqubo zokupholisa kwimizi mveliso - zihlala zisetyenziselwa ukubonelela ngamaqondo obushushu asezantsi kakhulu kunalawo anokufikelelwa ngezixhobo “ezipholileyo zomoya” okanye “ezomileyo” zokulahla ubushushu, njengerediyetha emotweni, ngokwenjenjalo kufezekiswa iindleko ukusebenza ngokukuko kwamandla kwiinkqubo ezifuna ukupholisa.
Iinqaba zokupholisa amanzi kwimizi-mveliso ziyahluka ngokobukhulu ukusuka kwiiyunithi ezincinane zophahla-ukuya kwi-hyperboloid (hyperbolic) enkulu enokuba ziimitha ezingama-200 ubude kunye ne-100 leemitha ububanzi, okanye izakhiwo eziziingxande ezinokuba ngaphezulu kwe-15 yeemitha ubude kunye ne-40 yeemitha ubude. Iinqaba ezincinci (ipakeji okanye iimodyuli) zihlala zakhiwe ngumzi-mveliso, ngelixa ezikhulu zisakhiwa kwindawo ngezinto ezahlukeneyo.